သူတို့ကတောင် သေနတ် နှင့် စပစ်နေပြီ ။
ရဲနှင့် ဘေးကင်းရာသို့ရွှေ့ပြောင်းသည့် လူအုပ်ကို ဒေါ်လာရောင်းဝယ်သူ ဇော်ဟိန်း ဆိုသူ၏ တိုက်အိမ် ၃ ထပ်မှ စတင်ပစ်ခတ်သည့်နောက် ရဲများက ၎င်းတို့အားပြန်လည်ပစ်ခတ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
စော်တီး အဘရေ ..
ရင်ထဲမှာ ဗလောင်ဆူနေပြီ…. တောက်….
“ကျွန်တော်လုံးဝ ကန့်ကွက်တယ်။ ရှုံ့ချတယ်။ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူပေးပါ။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ပျက်စီးသွားတဲ့ အိုးအိမ်တွေ အားလုံးကို ပြန်ပြီးတော့ အသစ်တဖန် ဆောက်နိုင်အောင် တာဝန်ယူပေးပါ။ နောက်ပြီး အစိုးရအနေနဲ့ အဲလို ကျူးလွန်တဲ့ သူတွေကို ဥပဒေအရ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးပါ။ လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ အင်မတန် မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာ မရှိဘူး။ အဲတော့ ဘင်္ဂါလီနဲ့ ရခိုင်တွေနဲ့ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်တော်တို့ လက်မခံနိုင်ဘူး။ ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကို အချိန်မဆိုင်းပဲ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူပေးပါ။ နောက်တစ်ခုက ဒီကိစ္စဟာ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးကို တလွဲအသုံးချပြီးတော့ ကျူးလွန်တဲ့ ကိစ္စမို့လို့ ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဒီပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အစိုးရအနေနဲ့ တိကျခိုင်မာတဲ့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကို ပြဌာန်းသင့်ပြီလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ဆိုလိုတာက ရောထွေးမှုတွေအားလုံးက ဘာလဲဆိုတော့ ဌာနေရဲ့နိုင်ငံသားတွေ အပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ အများကြီးရှိနေတယ်။ ဒီလို ကူးစက်လာပြီးတဲ့ အခါကျတော့ နိုင်ငံသား အချင်းချင်းကြားမှာလဲ ပြဿနာတွေ အများကြီး ရှိလာတယ်။ အဲလို ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ ပြင်ပက၀င်လာတဲ့ ပရောဂတွေကို ကာကွယ်ဖို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အရေးတကြီး လိုနေပါပြီ။ နောက်တစ်ခုက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ၊ ရခိုင်သားတွေ အားလုံးကို အကာအကွယ်ပေးရမယ့် ဥပဒေတစ်ရပ်ကတော့ ပြဌာန်းဖို့ လိုပြီလို့ ကျွန်တော် ထင်တယ်။ ဆိုလိုခြင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ ဘင်္ဂါလီဘက်ကသူတွေကို ညွှန်းနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘာသာပေါင်းစုံရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အပြင်ကနေ ၀င်လာတဲ့သူတွေကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ဥပဒေပြဌာန်းဖို့ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပြီဆိုတာကို အစိုးရကို တပ်လှန့်လိုက်တာပါ။” ဟု ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမြအေးက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဒါအမှန်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ပုဒ်မ ၁၄၄ ( Curfew) ထုတ်သင့်ပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးပြီး အခြေနေ အေးချမ်းသည်အထိ။
တီတီ အကြံပေးလိုက်လို့ ထင်တယ် ..
သမ္မတ က ကာဖျူး ထုတ်လိုက်ပြီ …
ဒေါက်တာဦးခင်မောင်လတ် သေသွားပြီလို့ပြောပါတယ် မွတ်စလင်တွေမီးစတစ်ဖက်ရေမှုတ်တစ်ဖက် လုပ်နေတယ် မွတ်စလင်လူကြီးပိုင်းက တရားဝင်ကန့်ကွက်စာပို့ တရားမဝင်မြှောက်ပေးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ လုပ်နေကြတယ်တဲ့ ကုလားတွေယုံကြည်စရာတော့မရှိဘူး သူတို့ဘာသာအတွက်ပဲ အဓိကအလုပ်လုပ် တဲ့သူတွေပါ သူကြီးမန့်ထားတာတွေ့လို့ပါ မကြိုက်လို့ ပွိုင့် ၆၀ နှုတ်လဲနှုတ်တော့ဗျာ ကျနော် မခံစားနိုင် တော့ဘူး ပွိုင့်မကျန်လို့ ရွာသားမဖြစ်ရင်လည်းနေပါစေ ကျနော်က ဗမာစစ်စစ် ဗုဒ္ဒဘာသာစစ်စစ် မန္တလေးသားစစ်စစ်ပါ
‎[Update] မောင်းတောမြို့ နယ်မှ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ရရှိသူများတွင် ပါဝင်သော ဆရာဝန် ဦးခင်မောင်လတ်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ တို့ နှစ်ဦးလုံးမှာ မောင်းတော ဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံ များက ပြောကြားသည်။
မောင်းတောမြို့ တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကို လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ပစ်ခတ်မှုများ စတင်ပြုလုပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မောင်းတောမြို့ ပေါ်တွင် သီတင်းသုံးနေသော ရဟန်းတော် တစ်ပါးက ပြောကြားသည်။
မန်းသားစစ်စစ်က မန်းဂေဇက်ရွာသားမဖြစ်ချင်နေပါစေ ကိုယ့်အမျိုးတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေတာတော့ မခံစားနိုင်တော့ပါဘူး
အနီပြမနေနဲ့ မကျေနပ်ရင်ရှိတဲ့ ပွိုင့်အကုန်နှူတ်…ဒေါသအလိပ်လိုက်ထွက်နေတာ..ချီးပါတာတောင်အလိပ်
ကုလားတွေ အရေအတွက်နဲနဲနဲ့တောင် ဒီလောက်ထကြွနေတာ မြန်မာပြည်ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်
သာဖြစ်လာရင်တော့ တွေးတောင်မတွေးရဲစရာပါ။ ကုလားတွေ တိုမြေပေါ်က ခုချက်ချင်းထွက်သွားကြပါ
မွတိဆလင် ခေါင်းဆောင်များ ရခိုင်ကိုအမြန် သွားသင့်ပါတယ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော၊ စစ်တွေမြို့ များတွင် ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိသော အကြမ်းဖက်မှုများကို ထိန်းသိမ်းရန် အတွက် ဒေသခံ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ နစခ အဖွဲ့အဝင်များ သာမက တပ်မတော်သားများပါ ပူးတွဲ တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြောင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး အကြီးတန်း အရာရှိကြီး တစ်ဦး၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
မောင်းတော မြို့ လယ် မီးစက်ဂွဆုံတွင် ဆူပူ အကြမ်းဖက်သူများကို ပစ်ခတ်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီနှင့် ရခိုင်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပါတီဝင်များထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
“မောင်တောမြို့ပြင်က အောင်ဗလရွာမှာ နစကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ သေနတ်အချက်ပေါင်းများစွာ ပစ်ခတ်ပေမယ့် တက်လာတဲ့ကုလားလူဦးရေကို မထိန်းနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အဲဒီဖက်ကို နစကတွေအင်အားထပ်ဖြည့်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခု ဘူးသီးတောင်အခြေစိုက် စစ်တပ်လိုက်လာပြီဖြစ်ပြီး တစ်နယ်လုံးကို မာရှယ်လောကြေငြာလိုက်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ခုသတင်းရေးသားနေတဲ့အချိန်မှာပဲ မောင်တောက CDMA ဖုန်းတွေ လိုင်းပြတ်တောက်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။”
(လေးဝတီ) လွတ်လပ်သည့် ရခိုင် သတင်းဌာန
အယ်ကိုင်ဒါတွေ ခြိမ်းခြောက်တာကိုကြောက်လို့ တရားမျှတစွာစီရင်ဖို့ နောက်မတွန့်သင့်ပါဘူး။
အခုအရေးကြီးဆုံးက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘယ်သူမှ ထပ်မသေဖို့လိုပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာကို ရိုဟင်ဂျာလိုမြင်တာ အကောင်းဆုံးပဲ
ယနေ့ ညနေ ၆ နာရီ အတွင်း မောင်တောတွင် သေဆုံးသူပေါင်း အယောက် ၄၀ ခန့်
ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် ကြားသိရပါတယ်….။
ဒုက္ခပါဘဲဗျာ။အခြေအနေတွေ ညိမ်တော့မလားလို့ ပိုဆိုးလာတော့မယ်
အကြမ်းဖက်သမား ဘင်္ဂါလီလူရမ်းကားတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားချေမှုန်းသင့်ပြီ။
ကဲရွာသူားတွေ ဒေါသထွက်တယ် မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သူများရခိုင်တွေကို
ခံနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့သွေသားတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့
ကို minn zaw
အပေါ်မှာ အဘ offer လုပ်ထားတယ်လေ ။
ငွေ ငါးသိန်း လှူမယ်လို့ ပြောထားတယ်လေ ။
ကာကွယ်တဲ့ကိစ္စက ၊ လောလောဆယ် ၊
ရဲ နှင့် စစ်တပ်က လုပ်နေပြီလေ ။
ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို ပိုက်ဆံက အဓိက အသက်ပဲ ။
အိမ် ဖျက် / မီးရှို့ ခံရတဲ့ သွေချင်း ရခိုင်တွေ ၊
အိမ်ပြန်မဆောက်နိုင်လို့ ၊ တခြား ရွာပြောင်းပြေးရရင် ၊
အဲဒီတော့မှ အရှုံးကြီး ရှုံးမှာဗျ ။
သူတို့ကို ပြန်ထူထောင်ပေးရမယ် ၊ အဓိက ငွေလိုလိမ့်မယ် ။
အလှူငွေ ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုပို့ရမယ်သာ မသိတာ ။
ဟုတ်တယ် ။။။ အခုပြောင်းပြေးရရင် .. ခံတပ်တစ်ခု ကျသွားသလိုပဲ ..
ပြန်ယူလို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး…
ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ကြပါဟ ..
မိုးပေါ် ထောင် မပစ်ဘူးဆို ..
ဒီလောက်တောင် ဦးနှောက်မရှိတဲ့ကောင်တွေကိုဆော်ဖို့ စစ်တပ်ထဲဝင်ချင်လာပီ။
ကိုယ့်တိုင်းရင်သားတွေ ဒီလို ဘင်ဂါလီကုလားစုတ်တွေ မီးရှိူ့ ဖျက်ဆီး အကြမ်းဖက်
ခံနေရတာ ရင်ထဲလုံးဝမချိဘူးဗျာ…။ ဗိုလ်ချုပ် ထူထောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်တပ်ရေ
ဘာတွေလုပ်နေတုန်း။ ရွှေဝါရောင်တုန်းကတော့ ဘုန်ကြီးတွေ မြန်မာလူမျိုးတွေကို
ပစ်လိုက်တာ တဒိုင်းဒိုင်းနဲ့… အဲ့က တောက်ဘင်ဂါလီကုလား မျိုးမစစ်တွေကို
သွားပစ်ပါရောလား။ နင်တို့က ဟန်ရေးပြနေ.. ဟိုက မှောင်ခိုလက်နက်တွေနဲ့
တယ်.. ကိုရင် စစ်ထဲမ၀င်ပဲ၊ ရေထဲရောက်သွားတာ ဒင်းတို့တွေ
အသေးနဲ့ မရရင် အကြီးနဲ့သာ ထု…
အေရိုးတွေ ရခိုင်ရေသောက်၊ ရခိုက်ကထွက်တဲ့ ထမင်းကိုစားပြီး
ဒီကောင်တွေထက် ခွေးကတောင် သာသေးတယ်…။
နောက်တစ်ခုတွေးကြည့်တာက ဆယ့်တစ်မီဒီယာသတင်းမှာ မန်းထားကြတာတွေကတော့
ပိုက်ဆံယူပြီး မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးတဲ့ လူကြီးတွေအကြောင်းလည်းပါတယ်
ဒေသခံနဲ့ အဲ့သည်လူမျိုးတွေရဲ့ အရေအတွက်ကို တွက်ကြည့်တာလည်းပါတယ်
ဆိုလိုတာက သူတို့ကိုပြန်ချဘို့ ကိုယ့်လူအင်အားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့သဘောပေါ့
ပြဿနာလို့ပြောရမလား ဆက်သွယ်ရေးပေါ့နော ဘာမှမသိကြဘူးလို့ဆိုတာပါဘဲ
ကျုပ်အမြင်ကတော့ လတ်တလော လျှပ်တစ်ပျက်ဖြစ်သွားမယ်
ဒါပေမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ ရဲဆိုတာရှိပါသေးတယ် လက်လှမ်းမှီရာမှာ စစ်တပ်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်
လျှပ်တစ်ပျက်ဖြစ်သွားတဲ့အခြေနေကို ဝုန်းဆို သတင်းပေါက်သွားလားမပြောတတ်
ရဲစခန်းတစ်ခုမှာ ကျည်ဆံ အတောင့် တစ်ထောင်လောက်တော့ရှိမှာပါ
လတ်တလောဖြစ်သွားတာကို မသိခင်ဘာမှမလုပ်နိုင်လိုက်တဲ့သဘောလို့ထင်ပါတယ် ( အထင် )
ကျုပ်အမြင် ယ္ခုအချိန်လောက်ဆို အဲ့ကောင်တွေ ပတ်ပြေးနေရလောက်ပါပြီ
( လက်နက်ကိုင်ရဲတွေရှိပါလျှက်နဲ့ အဲ့သည်မြို့ကို ထားပါတော့ ကိုကိုမီးသွေးတုံးတို့အဖွဲ့
( ကလားခေါ်ရင်ကြိုက်ဘူးဆိုလို့ပါ :D ) တွေ မီးရှို့လို့ရတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့
ရှို့တဲ့ကောင်တွေကို ဒေါသမထွက်နဲ့ သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ ရဲဆိုတဲ့ကောင်တွေကို ဆော်ကြပေါ့
အခြေနေအရ ဆိုခဲ့ပြီးသလို မသိလိုက်တဲ့ လျှပ်တစ်ပျက်အခြေနေမှာ ဘာမှ မကာကွယ်နိုင်ရင်
မပြောလိုပါဘူး ခု သိသွားပြီဗျာ သိပါလျှက်နဲ့ ဆက်ပြီးအဖျက်ခံနေရမယ်ဆိုတာကို
သတင်းအရ ဖြစ်သွားတယ် နာရီပိုင်းအချိန်လေးတစ်ခုလောက်ပါဘဲ
ည ၇ နာရီ ၄၁ မိနစ်
မောင်တောဒေသကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် မာရှယ်လော (ရာဇ၀တ် ကျင့်ထုံး ကိုဓ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄၄) ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ကျွန်တော်တို.လုပ်ရမှာက ပြည်တွင်း မွတ်စလင် နဲ. ရိုဟင်ဂျာ ကို သွေးခွဲထုတ်ဘို.ဘဲ
“၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအနေနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ကြိုးစားနေ တဲ့အခါမှာ အတက်နိုင်ဆုံး အငြင်းပွားစရာ ကိစ္စတွေ၊ မပြောမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကလွဲပြီး တော်တော်များများကို သည်းခံပြီး ရှောင်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ အခုနေမှာတော့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အတိအလင်းပြော ပါမယ်။ ရိုဟင်ဂျာသည် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသားမဟုတ်ပါဘူး။”
ကိုကိုကြီး (၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသာခေါင်းဆောင်)
ဦးကိုကိုကြီးကတော့ ပြောလိုက်ပြီ… ရိုဟင်ဂျာကုလားမီးသွေးတုံးတွေက
အခု အကွက်ကျကျနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သိမ်းချင်နေတဲ့ပုံပဲ။
ဒီနေ့ သောကြာနေ့ဆိုတော့ ဗလီတက်ကြတဲ့နေ့ပဲ..
ဒီကိတ်စ အစိုးရနဲ့ စစ်တပ်က တခါတည်းမရှင်းနိုင်ရင်
ရခိုင်တိုင်းရင်သားတွေ ဘေးရန်ကင်းကွာ ချမ်းသာကြပါစေ။ ကိုယ်ဝန် ကိုယ့်တာ ကိုယ့်ခန္ဓာ ချမ်းသာစွာ စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။
ကာကွယ်မှုမရှိသေးတဲ့ ရွာလေးတွေကို အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးခံရမှာ စိုးရိမ်နေတယ်ဗျာ။
ရခိုင်ပြည်ကြီး အမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေ…..။ အဲဒီေ-ာက် ကုလား တွေ မြန်မြန် မျိုးပြုတ်ပါစေ…..
ကျုပ်သည်postဖတ်ရတာ ရင်ထဲမှမွန်းလာတယ်။ အဘဖောနှင့်ကူညီထောက်ပံ့ချင်သူတို့ရေ။ ငွေကလွဲလို့ ဘာလိုလဲပြောပါ။ ကျုပ်ကယာဉ်မောင်းတစ်ဦးပါ။အမျိုးတွေအတွက် လုပ်အားပေးနိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီကနေ ထွက်ပြီးတော့ကိုလုပ်အားပေးမှာပါ။
အခုကျတော့လဲရိုဟင်ဂျာဖြစ်သွားပြန်ပီ။ ဆူးလေမှာ ဆန်ဒ ပြတာ ရိုဟင်ဂျာတွေလား။
မွတ်ဆလင်ကိုထိတာနဲ့ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ ထလုပ်တာလား။ မနက်ဖြန်ကော ဆူးလေမှာ စာရွက်တွေကိုင်ပီး ထွက်ရဲသေးလား။
ကိုမြအေးကလည်း ရိုဟင်ဂျာကို ရိုးမယ်ဖွဲ့တယ်။ သူ့သမီးကျတော့ ရိုဟင်ဂျာအရေးတွေလုပ်တယ်။
(၄) ဦးသိန်းဇော် (၃၆)နှစ် ခြေ/လက်တို့တွင် ဓါးခုတ်ခံရ
(၅) ဦးလှမောင် (၆၅)နှစ် ဦးခေါင်းတွင်
ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုမောင်တောဆးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့၊ ယင်းအနက် (၃)ဦးထပ်မံ သေဆုံးခဲ့။
အစိုးရတပ်၊ နယ်စပ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ လုံထိမ်းအဖွဲ့စသည့်အဖွဲ့များကမောင်းတောဒေသတွင်းသို့ ၀င်ရောက်အကြမ်းဖက် လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလီလူမျိုးများအားခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်သောကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်ဘက်သို့
ထွက်ပြေးသွားကြကြောင်း မောင်းတော ဒေသရှိ ဒေသခံပြည်သူများထံမှ သိရှိရသည်။
` ညနေ ၆နာရီလောက်က ထွက်ပြေးသွားကြတယ်၊ တပ်က ခြောက်ပြီးပစ်တယ်` ဟုမောင်းတောဒေသရှိ ဒေသခံပြည်သူ တဦးက ပြောသည်။
“မြို့မှာ ရွာတစ်ရွာကိုမီးကိုမီးရှိခဲ့တယ်။နယ်စပ်မှာတော့ရွာတွေအများကြီးရှို့ ထားတယ်။ကမ္ဘောဇဘဏ်နဲ့ ယူနိုက်တက်ပိာုတယ်ကိုလည်း
ဖျက်စီးထားတယ်”ပာု မောင်းတောမြို့ခံ ဦးအောင်ထွန်းကပြောသည်။
အဆိုပါအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ရခိုင်လူမျိူး ၃၀ဦးဖြင့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ “ဘင်္ဂလီတွေက ရခိုင်အိမ်တွေကိုဝင်စည်းတယ်၊ မြို့ထဲမှာတော့ပိာုပြေးဒီပြေးနဲ့ရခိုင်လူမျိူးတွေပြေးနေရတယ်”ပာု မျက်မြင်တွေ့ရသောနယ်ခံတစ်ဦးကပြောသည်။
အဆိုပါ အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ညနေ ၃နာရီခွဲအချိန်ခန့်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှအစိုးရထံမှ ပစ်မိန့်ရရှိခဲ့ပြီး ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ရဲတွေက ကျွန်မတို့ကိုဘေးလွတ်ရာကိုပြေးခိုင်းတယ်။ပြေးနေတဲ့လူအုပ်ကိုဘင်္ဂလီတစ်ယောက်က တိုက်ပေါ် ကနေ သေနတ်နဲ့ လှမ်းပစ်တယ်။ အဲဒီကနေစပြီးရဲတပ်ဖွဲ့က ပြန်ပစ်တာ”ပာု မောင်တောမြို့မှ မျက်မြင်တွေ့မြင်ရသူမစံခင်ကပြောသည်။
သမ္မတကြီးရေ ဖုယောင်းတိုင်နဲမရတော့ တုက်နဲ့လေ ဒီတခါ လုပ်ကွက်မှားမယ်နော်။
ရဲ နဲ့စစ်တပ်တွေဘာလုပ်နေကြလဲ ဒီကုလားတွေကို
”ယနေ့ မောင်တောဖြစ်စဉ်တွင် သတင်းပို့ချက်အရ ဗိုလ်မှူးရွာ မီးရှို့မှုတွင် ဒဏ်ရာရ။သေဆုံးစာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုမောင်တောဆးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့၊ ယင်းအနက် (၃)ဦးထပ်မံ သေဆုံးခဲ့။” ဟု ယနေ့ ည ၈ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် ဖော်ပြရေးသားထားပါသည်။
ဘူးသီးတောင်မှာလည်း ပုဒ်မ၁၄၄ ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလာဒေ့ရှနဲ့ စပ်နေတဲ့ ရခိုင်ရွာတွေရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက်လည်း လှည့်ကင်းတွေ စီစဉ်ပေးသင့်သလို
ဘင်္ဂလာဒေ့ရှနိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေကို သူတို့ဖက်က လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။(နယ်စပ်ကူးပြီး လိုက်သတ်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ပါ)
(အဲဒီဖက်က သဘောထားရိုးသားမယ်ဆိုရင် လူလူချင်းသတ်ဖြတ်နေတာတွေ ရပ်တန်းကရပ်အောင် သူတို့ဖက်က ပူးပေါင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်)
Dr.padonmar ရေ..ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အကြောင်းမသိသေးလို့ ထင်တယ်နော်